Talinayo Video Qaabka iyo Settings u Nokia Lumia 900
> Resource > Video > talinayo Video qaabab Nokia Lumia 900
Ma la yaabay sababta ay suurto gal ahayn in ay soo dhoofsadaan ama geliyaan qaar ka mid ah video files Diintiinii gal qalab mobile? Weligaa ma hubi ka hor in videos ah ay ku kaydsan yihiin qaab weel ama file in ay taageero aad brand iyo model qalab? Ma jiraan video iyo codec audio socon? Just tudhi dhowr daqiiqo akhrinta maqaalkan oo aad noqon doontaa in ku dhowaad daawado nooc kasta oo ah qaabab videos on your Nokia Lumia 900 dhamaadka waxaa ka mid ah awoodaan.
Qeybta 1: taageerayaan qaabab File u Nokia Lumia 900
Qeybta 2: Best Video Meeshay u Nokia Lumia 900
Qeybta 3: horena Video Settings u Nokia Lumia 900
Fiiri liiska qaabab file taageeray:
Ama video goob ugu wanaagsan ee lagu talinayaa in aad Nokia Lumia 900 waa in qaab MP4 ah sida hoos ku faahfaahsan:
Qaraarka: 800 * 480
Mararka qaarkood, ma ahan oo keliya oo sabab u ah weel video aqlka ama codec, laakiin waa laga yaabaa in tirada dhabta ah file (sida kuwa AVI ah) in uu baddalayso dambe ee videos on ciyaaro qalab aad. Wax kasta oo ay tahay, ka Converter Wondershare Video Ultimate oo kaliya waxaa laga yaabaa in aad xal. Kale oo ka duwan diinta aad videos at ah 30times cajiib ah si dhaqso, waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha aad ku yaalla. Waxa kale oo jira dhisay-in shaqo tafatirka si laguugu sahlo haddii aad u baahan tahay si aad xaalkaa videos ka hor diinta.
Waa arrin nagu waxba ka aqoon ugu fiican video goobaha ee telefoonada naga mobile. Inta badan waxay noqonaysaa inay kaliya download it ka goobood geeyo online ama surin-in cable USB ah ee suuqa kala iibsiga deg deg ah ka PC. Si kastaba ha ahaatee, waxa aad naftaada ku badbaadin karto waqti badan la presets ee Converter Wondershare Video ah Ultimate. Halkii ay ka baarayaan lagu taliyey video goobaha loogu talagalay qalab aad, aad si fudud u dooran kartaa ka presets dejinayaa.
Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa jiitaa-iyo-hoos u dhac aad video files mar rakibo ayaa dhameystirtay. Ka dib markii in, ka dooro Lumia 900 ka Qaabka Output> Device> Nokia . Haddii aad jeclaan lahayd in la soo dajiyo ama geliyaan aad videos nooc oo kala duwan ama model ah qalabka, si fudud dhirtuba dhex presets ee la heli karo.
Fadlan guji Settings (midig kor ku xusan loogu badalo button) haddii aad rabto in aad dib u soo ceshano faahfaahin dheeraad ah si aad video.